Saudia Airlines manomana ny fanitarana Karaiba vaovao amin'ny fahavaratra 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Saudia Airlines manomana ny fanitarana Karaiba vaovao amin'ny fahavaratra 2022
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, (ankavanana) sy Kapiteny Ibrahim Koshy, Tale Jeneralin'ny Saudia Airlines, nifandray tanana mba hamehezana ny fifanarahana. Mijery ny Senatera Hon. Aubyn Hill, Minisitra tsy misy portofolio ao amin'ny Minisiteran'ny Fandrosoana ara-toekarena sy ny famoronana asa. Fihaonana niresahana momba ny drafitra ho an'ny Saudia Airlines hanitarana ny sidina mankany Jamaika amin'ny fahavaratra 2022. Ny Minisitra Bartlett sy Hill dia tany Riyadh, Arabia Saodita, mba hijery ny fahafahana mampiasa vola sy hanamafisana ny fitsangatsanganana fizahan-tany mankany Jamaika.
Satria mikatsaka ny hanafaingana ny fanarenana ny fizahantany i Jamaika amin'ny fifantohana amin'ny tsena tsy mahazatra, ny Minisitry ny Fizahantany Hon. Edmund Bartlett dia nanambara fa ao anatin'ny lamasinina ny drafitra hanamafisana ny fifandraisana amin'ny rivotra eo amin'ny Afovoany Atsinanana sy Karaiba, miaraka amin'ny Saudia Airlines hanitatra ny sidina mankany Jamaika amin'ny fahavaratra 2022.
Jamaika Tourism dia manamboatra tsena vaovao any Afovoany Atsinanana izay hanome fifandraisana amin'i Afrika, Azia ary Azia Minora.
Ao amin'ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny Saudia Airlines dia misy ny fahatakarana fa ny faniriana dia ny hifanerasera amin'ny fahavaratra 2022.
Ny paikady midadasika kokoa dia ny hahatonga an'i Jamaika ho ivon'ny fifandraisana avy any Afovoany Atsinanana mankany Karaiba, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo, ary faritra any Amerika Avaratra.
Ity fanambarana ity dia nanaraka ny dia vao haingana nataon'ny Minisitra Bartlett tany Dubai tany Emirà Arabo Mitambatra (UAE) sy Riyadh, Arabia Saodita, mba hijery ny mety hisian'ny fampiasam-bola sy hampiroboroboana. fizahan-tany mankany Jamaika.
"Ny tapa-bolana farany dia tena zava-dehibe ho anay amin'ny fiezahana hamolavola ny tsena vaovao any Afovoany Atsinanana izay hanome anay ny fifandraisana amin'i Afrika, Azia ary Azia Minora. Niresaka tany Dubai sy Riyadh izahay. Efa mandroso tsara ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Saudia Airlines ary efa fantatray fa misy ny finiavana handraisana anjara amin'ny fahavaratra amin'ny 2022, ”hoy ny minisitry ny fizahantany.
"Ny antsipirian'io fandaharana io dia miara-miasa amin'i Saudia sy ny mpitatitra iray hafa izay hanamora kokoa ny fifandraisana amin'ny fotoana fohy. Noho izany dia tena faly izahay mahita ny vavahadin'i Moyen Orient hisokatra ho any Jamaika, ”hoy izy.
Ny minisitra Bartlett dia nanamarika fa ny paikady midadasika kokoa dia tokony hanana Jamaika no lasa foibe ho an'ny fifandraisana avy any Afovoany Atsinanana ka hatrany Karaiba, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo ary faritra any Amerika Avaratra. Izany dia hametraka an'i Jamaika ho ivon'ny fifandraisan'ny rivotra eo amin'ny Atsinanana sy Andrefana. "Tena matoky izahay fa hahita vokatra avy amin'izany ao anatin'ny fotoana fohy izahay satria samy naneho faniriana mafy ho an'i Karaiba ny zotram-piaramanidina noresahintsika ary, indrindra fa i Amerika Latina," hoy izy.
Saudia, fantatra taloha hoe Saudi Arabian Airlines, no mpitatitra sainam-pirenen'i Arabia Saodita. Io no fahatelo lehibe indrindra any Afovoany Atsinanana raha ny vola miditra, aorian'ny Emirates sy Qatar Airways. Izy io dia miasa amin'ny sidina an-trano sy iraisam-pirenena mankany amin'ny toerana 85 mahery any Afovoany Atsinanana, Afrika, Azia, Eoropa ary Amerika Avaratra.